Ihe Ọhụrụ Ihe Podcast: Na Onye Ọbịa Douglas Karr | Martech Zone
Na Indianapolis, enwere ije na oghere teknụzụ ahịa na ọnụ ọgụgụ na-eto eto nke ntinye ego nke HighAlpha - nke amụrụ site na ExactTarget. Anyị akọrọla banyere otu n'ime ụlọ ọrụ ndị ahụ, Kọntifi, ma gbaa ajụjụ ọnụ CEO RJ Talyor na Ajụjụ ọnụ Martech anyị usoro. Izu a, Podcast ọkachamara Liz Prugh nke Fandom dị ọcha ama ama na RJ kpebiri ịgba m ajụjụ ọnụ maka pọdkastị ha, Ihe Ọhụrụ!
Ozi nke Ihe Ọhụrụ Ọhụrụ:
Ebumnuche anyị na Ihe Ọhụrụ Ahụ bụ ikpughe sayensị nke ahịa ma gbasoo eziokwu na nghọta na ahịa. Ihe ohuru ohuru na-adi n'ihu nke ihe ohuru ohuru, ma nye ndi ndu ahia dijitalụ site n'ike mmụọ nsọ, otu esi eduzi, mkparịta ụka na op-eds na ndị isi ụlọ ọrụ, ozi ahịa dijitalụ a kpochara, na nghọta nke data.
Ebe ọ bụ na m bụkarị ajụjụ ọnụ-ER, anaghị m enwe ohere ịza ajụjụ ọnụ-EE ka m wee chọọ ịkekọrịta ihe omume ebe a. Ndị otu ahụ chịkọtara ụfọdụ ajụjụ ịma aka sitere na otu m si nweta ebe m nọ ruo ihe m chere gbasara ụlọ ọrụ anyị na-agbanwe ngwa ngwa. May nwere ike iju gị anya na ụfọdụ azịza m gbasara ihe egwu, ihe okike, na nkuchi.
Special ekele Liz na RJ n'ihi na m nwere na nwunye. Anaghị m ekwukarị akụkọ nke m! Jide n'aka ịdenye aha na-akụ na, ha nwere ịtụnanya Ajụjụ ọnụ na-echeghị iche nke ndị ọbịa.
Tags: DK New MediaNwachukwu karrdouglas karrzuru okeAhịa Podcastezigbo fandommmmmmmmmmmmm